I-TatTVam Asi Organic Farmstay Cottage - Bul Bul - I-Airbnb
I-TatTVam Asi Organic Farmstay Cottage - Bul Bul
Chikkamagaluru, Karnataka, i-India
Ikamelo e-i-lodge ibungazwe ngu-Vishal
U-Vishal unokuphawula okungu-20 kwezinye izindawo.
I-TatTVam Asi organic farmstay iyindawo eqinisekisiwe ngokuphelele engokwemvelo nezilwane zasendle enobungane etholakala ku-1450 mts ngaphezu kolwandle ebheke indawo yokulondoloza i-bhadra tiger. Indlwana i-Bul yindlwana evulekile eyenziwe ngezandla nefenisha ephezulu eyenziwe ngokhuni lwendawo.
Indlwana yenziwa ngomqondo omncane owenza kahle ukukhanya kwemvelo nendawo enhle. Ikamelo ngalinye lihlukile kunelinye elihlinzeka ngokuhlala okuyingqayizivele ngaso sonke isikhathi lapho uvakashela. Isidlo sasekuseni sifakiwe.
I-Tat tvam asi Organic Farmstay isendaweni yezilwane zasendle i-bhardra okuyenza ihluke. Indawo inothile ngezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo futhi thina epulazini le-tat tvam asi sikuthatha njengento ebaluleke kakhulu ukuthi isivakashi sethu sihloniphe indawo esizungezile. Le ndawo inokusakaza okuningi futhi iyindawo ukuze isivakashi siyijabulele. Siphinde futhi sihlinzeke ngohambo lwezindlu ukuze sifundise isivakashi sethu mayelana nezitshalo nezilwane ezihlukile zesifunda. Ipulazi liphethe izinhlobo zezinyoni ezingaphezu kwe-100, izinhlobo eziningi zezimvemvane nezilwane ezincelisayo.
umbhede oyidabulu engu- 1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, Umbhede ongu-1, Omatolasi abangu-1
I-TatTVam Asi iyindawo eqinisekisiwe ngokuphelele engokwemvelo neyezilwane zasendle etholakala ku-1450 mts ngaphezu kolwandle ebheke indawo yokulondoloza i-bhadra tiger. Yithi kuphela ipulazi eliqinisekisiwe elingokwemvelo endaweni ephezulu/yangaphakathi ye-ba budan giri range. Wonke amakamelo ethu enziwe ngomqondo omncane owenza konke okukhanya kwemvelo nendawo enhle. Ikamelo ngalinye lihlukile kunelinye elinikeza indawo yokuhlala ekhethekile ngaso sonke isikhathi lapho uvakasha. Futhi ifenisha yenziwe ngezandla ngamapulangwe asuka epulazini okwenza ikamelo lizwakale liphilile futhi liyingxenye yendawo ezungezile.